BOOSAASO(P-TIMES) – Suuqyada ganacsiga ee magaalada Boosaaso oo xudun u ah dhaqaalaha Puntland ayaa xiran maalinkii 2aad, waxaana gabi ahaanba aan socon wax shaqo ah oo ku saabsan arrimaha ganacsiga, ka dib markii ay cabasho ka muujiyeen ganacsatadu Canshuur cusub oo ay ku soo rogtay wasaaradda Maaliyada ee Puntland.
Laakiin, Wasaaradda Maaliyadda ayaa diiday jiritaanka warkan, waxayna isku xariirisay cabashada Canshuuraha ee Ganacsatada iyo Dhaqdhaqaaqyada ciidan ee kajira gobalka Sanaag ee u dhaxeeya iyada iyo Somaliland, taas oo ay dad badan aad uga yaabisay.
Wasiir kuxigeenka Maaliyada ahna Kusimaha Wasiirka ayaa sheegay in aysan jirin Canshuur ay ku soo rogeen ganacsatada, balse ay si nidaam ah ka dhigeen Canshuurtii ay horey u qaadi jirtay dawladdu, isagoo ula jeeda in ay wax badan horey u dhaqaajiyeen.
Ganacsatadu wey diidan yihiin in ay ganacsiga furaan, waxaana gabi ahaanba xiran Suuqyada magaalada Boosaaso, dad badana oo ay noloshoodu katiirsan tahay suuqyada ayaa walaac muujinaya, waxaana la xiray qaar kamid ah madaxda Shirkada waa weyn ee wax soo dajiya.
Bagaashka, Raashinka, Dharka iyo Kabaha ayaa lagu kordhiyey Canshuur dhan 50%, sida ay ku doodayaan Ganacsatada magaalada Boosaaso, balse Wasaaradda Maaliyadu waxay sheegtay in aysan waxba kordhinin, taas oo ilaa hadda aysan jirin xal laga gaaray.
Ciidamada Amniga ayaa Suuqa la keenay si ay u xiraan ganacsatada diida in ay furaan goobaha Ganacsiga, waxaana Suuqyada lagu arkayaa Gaadiidka dawladda ee ciidanka.